ergopedic na-agbatị mmiri na mmiri na ọnụ ahịa ahịa | Rayson
Site na ike R & D siri ike na ike nrụpụta, Rayson ugbu a abụrụla ọkachamara na onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ. A na-emepụta ngwaahịa anyị niile gụnyere matrik nke na-acha uhie uhie na-emepụta ntọala na sistemụ nchịkwa na usoro mba ofesi. Ergopedic na-etinye akwa mmiri mmiri, anyị etinyela ego na ngwaahịa R & D, nke na-eme ka ọ dị irè nke mmiri mmiri na-agba mmiri. N'ịdabere na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ anyị, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ọnụahịa kachasị mma, na ọrụ kachasị mma. Nabata ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Oche nke rayson rergopedic na-ese ihe na-enye mmiri na-eme ọtụtụ ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ ejiji. Ihe ndị dị mkpa gụnyere agba, silhouette, nke dị na akwa, udiri, nlele na ihe ndị ọzọ.